8 सबैभन्दा प्रभावशाली सेक्स ड्रग पाउडर संसारमा | AASraw
/ब्लग/सेक्स ड्रग पाउडर/विश्वमा 8 सबैभन्दा प्रभावकारी सेक्स औषधि पाउडर
प्रकाशित 08 / 29 / 2018 by 阿斯劳 मा लेखियो सेक्स ड्रग पाउडर.
लिङ्गोको हानि, महिला र पुरुष दुवै मा, एक सामान्य समस्या हो, सामान्यतया थकान, तनाव वा उमेरको नियमित कारण हो। इच्छा जोगाउन, यौन दुर्व्यवहारहरू छन् जुन यो बढावा गर्न प्रयोग गरिन्छ।
1998 मा, संयुक्त राज्य अमेरिका र युरोप को खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए र ईएएफएसए) ले ईडी को वियाग्रा () को बजार उपचार को लागि स्वीकृत गर्यो जो दुनिया भर को एक संवेदना को कारण बन्यो। Sildenafil citrate को नैदानिक ​​परिणाम 171599-83-0 शीर्ष मेडिकल पत्रिका न्यू इंग्लैंड जर्नल अफ मेडिकल इन प्रकाशित छ।
यौन दुर्व्यवहार वर्गीकरण
पुरुषहरूले प्रयोग गरे
ताडलाफिल (एक्सएनएक्सएक्स- 171596-29), erectile dysfunction को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ। टाडालफिल एक औषधि हो जुन एंजाइम फास्फोमेस्टरएस्टे प्रकार टाइप5(पीडीई-5) vasodilator नाइट्रिक अक्साइड असक्षम गर्न को लागी जिम्मेदार छ, वर्तमान मा व्यापार नाम Cialis अन्तर्गत ट्याब्लेटको रूपमा मार्केट गरिएको छ। यो हालमा पुर्मनरी धमनी हाइपरटेन्सनको उपचारको लागि स्वीकृत गरिएको छ, र अन्य सर्तहरूको लागि प्रयोग गरिएको छ। Cialis, 5mg, 10mg र 20m खुराक को ट्याब्लेट्स, फिल्म को साथ र बादाम को रूप मा कवर गरिएको पहेंलो रंग हो। पुर्मनरी उच्च रक्तचापको लागि अनुमोदित खुसी 20 मिलीग्राम हो र यो एडिकोर्काको ब्रान्डमा बिक्रि हुन्छ।
क्लिनिकल अध्ययनहरूले देखाएको छ कि टाडालफिल नाइट्रेट ड्रग्सको एन्टिहाइर्टीनिक प्रभाव बढाउन सक्छ। यो नाइट्रिक अक्साइड / सीजीएमपी मार्गमा नाइट्रेट र टाडालुफिलको संयोजनको परिणाम हो। यसैले, रोगीहरू कुनै पनि प्रकारको नाइट्रेट लिन यो उत्पादन लिनबाट निषेधित छन्।
Sildenafil Citrate 171599-83-0 एक औषधि हो जसले अल्टटिटिबल डाइफिशन र पुर्मनरी धमनी हाइपरटेन्सन (पीपीएच) को प्रयोग गरेको छ। Sildenafil चयन गर्न सक्छन् मानवमा PDE5 गतिविधि लाई रोक लगाउन। PDE5 अत्यधिक स्पंज स्पेसमा र अन्य ऊतक र अङ्गहरूमा कम व्यक्त गरिएको छ। Sildenafil लिने पछि, कोरस cavernosum vasomotor मांसपेशिहरु ड्रग को कार्य को तहत आराम, रक्त प्रवाह बढेको छ, गुफा शरीर को congested छ, र लिंग को बनाइयो छ, यसैले एक पायजात्मक प्रभाव पनीर erectile dysfunction मा उत्पादन।
पिरिला अत्याधुनिक रोग संग रोगहरु मौलिक प्रशासन (क्लिनिकल डाटा 27 र 12 मिनेट बीच वितरित गरिन्छ) पछि 70 मिनेटको कार्यको औसत अवधि छ।
वर्डेनफिल 224785-91-5 पनीर खनिज रोगको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो औषधि एक प्रकार5फास्फोडीएस्टर (PDE5) अवरोधक हो। यस औषधिको मौखिक प्रशासनले प्रभावकारी गुणस्तर र निर्माणको अवधि सुधार गर्न सक्छ र erectile dysfunction पुरुष पुरुषको यौन सफलता दर सुधार गर्न सक्छ। पेनिल निर्माणको प्रारम्भ र रखरखाव गुफाको मासुको मासुपेशी कक्षको विश्रामबाट सम्बन्धित छ।
Erectile dysfunction को उपयोग गर्न को लागी को उपयोग को लागि, vardenafil को समय भन्दा पहिले क्षणमा पनि रोक्न सक्छ।
Avanafil 330784-47-9 अप्रत्यक्ष रोगको उपचारमा प्रयोग गरीएको पीडीई-एक्सएनएक्सएक्स इन्डिटरहरूको समूहबाट एक डिप्लोच ड्रग हो। Vardenafil क्लिनिकल को फास्फोमेस्टरएक्स5(PDE5) अवरोधक को एक नयाँ पीढ़ी साबित भएको छ, र vardenafil हाइड्रोक्लोराइड अत्यधिक शक्तिशाली, अत्यधिक चुनिंदा, र राम्रो सहनशीलता छ। यसको आगमनले erectile dysfunction (ED) को उपचार को लागि नयाँ विकल्प ल्याएको छ।
Cialis 20mg को लागी काम गर्न कति लामो लाग्छ?
पीडीई-5 अवरोधकहरूको प्रभाव यौन उर्जा चाहिन्छ। व्यक्तिगत प्रभावकारीता र सहनशीलताको आधारमा, खुसी अधिकतम 200 मिलीग्राममा बढ्न सक्छ वा 50 मिलीग्राममा घटाउन सकिन्छ। अन्य पीडीई-एक्सएनएक्सएक्स इन्डटिटरहरूको तुलनामा, फास्फोमेस्टरएक्स-एक्सएनएमएक्स (पीडीई-एक्सएनएक्सएक्स) को लागि एानाफिलको उच्च छनोटता देखाइएको थियो, यसले राम्रो सहनशीलताको परिणाम देखाउँछ।
Zydena (Udenafil 268203-93-6) 2005 मा सुरू भएको दक्षिण कोरिया (दाङ-ए फार्म द्वारा) को विकास भएको थियो। Udenafil एक PDE-5 अवरोधक हो। जडिनाले गम्भीर दुष्प्रभावहरू जस्तै धुलो भएको दृष्टि जस्ता कुनै पनि गंभीर दुष्प्रभावको लागि सुरक्षित औषधिको लागि सुरक्षित ड्रगलाई मानिन्छ। तर यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छोटो समय हो, त्यहाँ धेरै अध्ययनहरू छैनन्। 30 मिनेटहरू प्रभाव लिनको लागी आवश्यक छ। इन्जेस्टन, डोजर फारम, विन्डोजिन्डिसेशनहरू, एक्शनको मोड वियाग्राको बराबर हो।
Flibanserin 147359-76-0 मूलतः अवसाद को उपचार को लागी एक औषधि को लागी विकसित गरिएको छ, तर यस क्षेत्र मा प्रभावकारी हुन को लागी पाया छ र अब महिलाहरु मा hypoactive यौन रोग (एचएसडीडी) को उपचार को लागि पुनः अनुमोदन गरिएको छ - तथापि, प्रभावकारिता पुष्टि गरिएको छैन यहाँ फ्लिबिन्सेन (Addyi) को विषय को आसपास धेरै विवादहरु को कारण ले र यसको कथित प्रभाव।
aasraw। com सञ्चालनमा नैदानिक ​​परीक्षणहरुमा, यो प्रमाणित गरिएको छ कि पदार्थ 0.5 र 1 को एक महिना मा सफल यौन अनुभवहरु को संख्या मा सुधार, यो placebo, एक मामूली लेकिन सांख्यिकीय महत्वपूर्ण प्रभावकारिता तुलना की तुलना में सुधार। अध्ययनमा सहभागी महिलाहरूले2र3संतोषजनक मासिक यौन अनुभवहरू बीचको औसतमा यो सुरु गर्यो।
Flibanserin एचसीएल एक्शन को तंत्र, यो उत्तेजना र रोकथाम दुवै न्यूरोट्रांसमीटर पथ मा कार्य गर्दछ। सीरोटोनन को 5-HT 1A रिसेप्टरहरु मा एक एपोनवादी कार्य को माध्यम ले, विभिन्न एंटीडिस्प्रेन्टेंट ड्रगहरु को समान एक तंत्र र 5-HT 2A रिसेप्टर्स को एक विरोधी कार्रवाई को माध्यम ले.
Dapoxetine एचसीएल 119356-77-3 एक औषधि हो कि पहिले समयको क्षणमा उपचारको लागी प्रयोग गरिन्छ। यो छोटो अवधि र कार्यको एक चयनयोग्य सीरोटोन रिप्पेक अवरोधक हो। अघिल्लो अध्ययन अवस्थाको आधारमा, स्खलनको असाधारण विलम्बता अवधिको तीन देखि तीन गुणा लामो समयसम्म लिन सकिन्छ। यसबाहेक, डैक्सोक्सिनिनले यौन सन्तुलनलाई सुधार गर्न सक्छ र पुरुषको क्षणमा नियन्त्रण गर्दछन्, र दुःख र अन्तरक्रियात्मक कठिनाइलाई कम गर्न सक्छ।
- Dyclonine एचसीएल
Dyclonin एचसीएल 536-43-6 एक सर्वोच्च एनेटिस्टिक छ कि चिकित्सा परीक्षाहरु र प्रक्रियाहरु देखि पहिले माइक्रोस झिल्ली को एनेस्थेसिया को लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो पनि लेजरजेन्समा पाइन्छ र गला र गला क्षेत्रको लागि स्प्रे गर्दछ। Dyclonin पनि ग्याग रिफ्लेक्स थिच्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
यस उत्पादनले विभिन्न तंत्रिका आवेगहरू वा उत्तेजनाहरूको प्रसारणलाई रोक्न सक्दछ, स्पर्श र दुखाइको भावनालाई रोक्न, र छालामा एन्जिल्सिक, एन्टिप्रुरिटिक र ब्याक्टेरिसिडल प्रभावहरू छन्।
यो उत्पादन एक आघात केटोन स्थानीय स्थानीय आहार हो। यो एक छिटो शुरुआत छ र लामो समय सम्म रहन्छ। यसमा छाला मा antipruritic, एन्जिल्सिक र जीवाणुरोधी प्रभाव छ।
निष्कर्ष र सिफारिश
यौन औषधि लिने कारणहरू
यौन दुर्व्यवहारले तपाईंलाई केही समस्याहरू समाधान गर्न मद्दत गर्दछ। तथापि, यदि केहि समय को लागि उत्तेजना लेने पछि, तपाईंको समस्या अझै पनि हल छैन, तपाईंको समस्या को निपटने को लागि पेशेवर (sexologist या doctor) मा परामर्श गर्न संकोच मत करो। पछि तपाईलाई सल्लाह दिनु र यो लड्नको लागि समाधान दिनुहुनेछ। यहाँ सेक्स ड्रगको विभिन्न विस्तृत लक्ष्यहरू छन्।
तपाईंको यौन संभोगको समयमा केहि खुशी हासिल गर्न मद्दत गर्नुहोस्
यहाँ यौन औषधिको मुख्य उद्देश्य यहाँ छ: मानिसहरूलाई आफ्नो पतिको साथ यौन सम्बन्धमा मजा लिनु मद्दत गर्न। यसका लागि, यो निश्चित रूपमा उत्पादन बक्समा संकेत गरिएको खुट्टामा ध्यान दिनु आवश्यक छ, तर यदि तपाइँ यसको आदर गर्नुहुन्छ भने, तपाइँको लिबदो मात्र बढ्न सकिन्छ र तपाईंको रिपोर्टहरूको लागि मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ।
- बाधाहरू लड्न र निर्माण समस्याहरू विरुद्ध लड्न
यदि तपाई निर्माण समस्याको सामना गर्नुहुन्छ भने यौन दुर्व्यवहारले तपाईंलाई लड्न मद्दत पुर्याउन सक्छ। यस विकार विरुद्ध लड्नुको साथै, तपाईं एक पूर्ण यौन सम्बन्ध पनि फेला पार्नुहुनेछ र तपाईले आफ्नो पति वा पत्नीलाई बिना "ब्रेकडाउन" डराउने बिना डराउन सक्नुहुनेछ; एक समय मा एक निराशाजनक र शर्मनाक भावना।
महिलाहरू एक अवरोधमा पनि प्रतिरक्षा गर्दैनन्। फेरि, यस समस्याको सामना गर्न, एक यौन दुर्व्यवहार लिन रोचक हुन सक्छ। यो अन्तिम महिलाहरु संग, तपाईंको अवरोध गायब हुनेछ र अभिनय गर्दा तपाईं अधिक पूरा हुनेछ।
आफ्नो कामुकता र आफ्नो सम्बन्ध सुधार गर्न
के तपाईं गहन यौन चाहानुहुन्छ? के तपाईं आफ्नो कामकालमा खुशी पाउन खोज्दै हुनुहुन्छ? यौन दुर्व्यवहारले तपाईंलाई ती भावनाहरू प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ! यो उत्पादन पुरुषहरु द्वारा लिइन्छ र महिलाहरु द्वारा तीव्र कामुकता बाँच्न चाहने इच्छा राख्दछन् र उनीहरूको सम्बन्ध सबै भन्दा राम्रो सम्भावित अवस्थामा हुन्छ।
त्यसैले यौन दुर्व्यवहारको लागी ठूलो सहयोग हुनेछ र उहाँप्रतिको धन्यवाद, तपाईंको आन्तरिक सम्बन्ध उत्तम भन्दा बढी हुनेछ!
-तपाईंको लाइब्रेरी बढाउनुहोस्
जीवनको समयमा, त्यहाँ हुन सक्छ जब एक पुरुष वा स्त्री अब आफ्नो पतिको साथ सेक्स गर्न चाहँदैनन्। यो समस्या प्रायः मनोवैज्ञानिक हो र विभिन्न कारकहरूको कारण हुन सक्छ: थकान, व्यक्तिगत समस्या, तनाव ... यसले लिबदो र खुशीमा बिसाउन सक्छ।
यी दुई भावनाहरू प्राप्त गर्न, एक यौन दुरुपयोग प्रभावकारी हुन सक्छ। निस्सन्देह, यसले तपाईंको लिबियालाई बढावा दिन र केहि यौन भूख को पुन: प्राप्त गर्न मद्दत गर्न सक्छ!
और यदि तपाईं खुशी को लामो समय सम्म केहि सुझावहरु चाहते हो, यहाँ एक उपयोगी लेख हो!
पुरुषहरूको लागि सबैभन्दा उत्तम यौन औषधि के हो?
हाल, बजारमा पुरुषहरूको लागि धेरै यौन उत्तेजनाहरू छन्। उत्तम छनौट र खरीद गर्न गाह्रो हुन सक्छ र यो बहुविध यी यी छनौटहरूको सामनामा हराउन असामान्य छैन। यस लेखको बाकीमा, म तपाईंलाई धेरै प्रभावकारी सेक्स ड्रगहरू दिन्छु जसले तपाईंलाई निश्चयको लागि तपाईंको लिबिया सुधार गर्न मद्दत गर्नेछ!
तर तपाइँ तिनीहरूलाई पत्ता लगाउनु अघि, थाहा पाउनुहोस् कि पहिलो कुरा तपाईंको डाक्टरसँग कुराकानी गर्न हो। यो पेशेवरले तपाईंलाई बताउनेछ कि यदि उत्तेजना लिनु आवश्यक छ र यदि तपाईंको स्वास्थ्यको सामान्य अवस्थासँग मिल्दो छ भने। कुनै पनि अवस्थामा, वियाग्रा वा भिइलीज जस्तै औद्योगिक यौन उत्तेजनाहरू मात्र चिकित्सकीय पर्चामा दिइन्छ र त्यसकारण यदि तपाइँ तिनीहरूलाई प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाइँको डाक्टरसँग सल्लाह गर्न अनिवार्य छ।
साथै, तल प्रस्तुत गरिएका विभिन्न उत्पादहरू एफ्रेडिडिअसहरू छैनन्। तिनीहरू तपाईंको लिबिया वृद्धि गर्न त्यहाँ छैनन्, तर तपाईंको यौन संभोगको समयमा एक उचित निर्माण गर्न र नियमित रूपमा आफ्नो पेसामा रक्त प्रवाह बढाउनको उद्देश्य।
यी उत्तेजकहरूले तपाईंलाई सन्तुष्टिजनक निर्माण गर्न मद्दत गर्नेछ, तर बिना प्रयास बिना। यो ठाउँ लिनको लागी, यौन उत्तेजना को स्थानमा राख्नु पर्छ।
MAGL अवरोधक र FAAH अवरोधक: JW-642 र OL-135 र PF-7507उत्तम नोट्रोपिक्स (स्मार्ट ड्रग्स) 2018 को बजार मा